Muwaadin Ingiriis ah oo lagu waayey dalka Ruushka iyo Xaalada labada dal oo cirsha Gashay | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Muwaadin Ingiriis ah oo lagu waayey dalka Ruushka iyo Xaalada labada dal oo cirsha Gashay
Published on July 12, 2018 by Caydiid Cabdi Raxmaan Aadan · No Comments ·
(12-7-2018) Muwaadin u dhashay waddanka Ingiriiska ayaa lagu waayey gudaha dalka Ruushka, halkaas oo uu u tegay inuu daawado, isla markaana taageero xulka qarankiisa England ee ka qayb-gelayay Koobka Adduunka ka hor intii aanay Croatia ku reebin wareegga semi-finalka Arbacadii.
Labada dal ee Ingiriiska iyo Ruushka ayaa waxa ka dhexaysa xurguf siyaasadeed oo cirka isku shareertay oo sababtay in ay caydhiyaan qaar ka mid ah dublomaasiyiintii labada dhinac ku kala sugnaa, taas oo ka abuurantay markii basaas Ruush ah oo ku sugnaa magaalada London iyo inan uu dhalay la sumeeyey, isla markaana lagu eedeeyey sirdoonka Ruushka inay arrintaas fuliyeen. Waxa kasii dambeeyey laba qof oo midkood geeriyooday oo dhowaan sidii basaaskaas hore oo kale loo sumeeyey.
Iyadoo qaskani taagan yahay ayaa uu bilaabmay Koobka Adduunka oo lagu qabtay Ruushka oo reer galbeedka aanay isku wanaagsanayn, waxaanay taasi keentay in Ingiriisku soo saaro digniin uu muwaadiniintiisa ku wargelinayo in aanay tegin Ruushka oo aanay u raacin xulka dalkooda, haddii ay dhacdo inay tagaanna ay taxadar dheeraad ah sameeyaan.
Sidaas oo ay tahay ayaa waxa dhacday in muwaadin Ingiriis ah oo lagu magacaabo Douglas Moreton uu ayaa la waayey meel uu jaan iyo cidhib dhigay wakhti uu kasoo laabanayey magaalada Samara oo uu kusoo jeeday magaalada Moscow oo ay ka dhacaysay ciyaartii semi-finalka ee England iyo Croatia.
Wasaaradda arrimaha dibedda ee UK ayaa dalbatay in si degdeg ah ay dawladda Ruushku usoo hesho muwaadinkan lagu la’yahay dalkooda, waxaanay ka shakisanaayeen in rabshad-wadeyaal Ruushka u dhashay ay afduubteen, hase yeeshee Safaaradda UK ee magaalada Moscow ayaa lagu wargeliyey in la helay muwaadinka.
Safaaradda UK ee Moscow ayaa waxa ay sheegtay in ay la xidhiidhay Douglas Moreton oo uu badqabo.
Warkan dambe ayaa waxa uu xumad jebin u noqday qaskii siyaasadeed ee dib u qarxi lahaa.